पीडामा छन् कश्मीरका मानिस, एक युवतीको डायरीले देखाउँछ वास्तविक चित्र - Nepali Mato
पीडामा छन् कश्मीरका मानिस, एक युवतीको डायरीले देखाउँछ वास्तविक चित्र
२८ श्रावण २०७६, मंगलवार १७:०२ August 13, 2019 Nepali MatoLeaveaComment on पीडामा छन् कश्मीरका मानिस, एक युवतीको डायरीले देखाउँछ वास्तविक चित्र
दिल्ली विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत एक कश्मीरी युवतीले कश्मीरमा पाँच दिन भोगेका घटना डायरीमा नोट गरेकी छन् ।
बीबीसीको हिन्दी संस्करणको अन्लाइनमा उक्त डायरी प्रकाशित भएको छ । यहाँ त्यसको अनुवाद प्रस्तुत छ :
द्वन्द्व चलिरहेको ठाउँमा हिंसा र विश्वासघात भइरहेका हुन्छन् । त्यतिखेर कुनै सूचना सही भए पनि त्यसको विश्वास लाग्दैन ।
शुक्रवारदेखि सोमवार साँझसम्म फरक फरक मानिसले कश्मीरमा थप सुरक्षाबल तैनाथ गरिएको विषय अनि यात्रीहरू तथा कश्मीरबाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई कश्मीर छोड्न गरिएको अपीलका फरक फरक कारण दिएको हामीले सुनिरहेका थियौं ।
केही मानिस यस राज्यलाई तीन भागमा बाँडिन सक्ने भन्दैथिए । कश्मीरलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाउन सकिने अनि जम्मुलाई राज्यको दर्जा दिइने र धारा ३७० तथा ३५क लाई हटाउन सकिने कुरा भइरहेका थिए ।
सोमवार कर्फ्यु लगाइने हल्ला चलेको थियो । यसपालिको कर्फ्यु कठोर र लामो समयसम्म रहने डर थियो । म लाल बजारबाट आफ्नो घर नाड कडाल जाँदै थिएँ । सडकमा एकजना हतारहतार गरेर गइरहेको देखें । एटीएम अगाडि मानिसको लामो भीड थियो । किराना पसलअगाडि दशौं कार थिए । पेट्रोल पम्प खाली थिए किनकि शुक्रवार राति नै मानिसहरूको भीडले पेट्रोल सक्यो ।
एउटा पेट्रोल पम्पमा मेरो भाइलाई पेट्रोल त छ तर सर्वसाधारणलाई नदिएर सीआरपीएफ र प्रहरीलाई लागि सञ्चित राख्नू भनी निर्देशन आएको बताइयो ।
भाइको परीक्षा अगस्ट ६ मा हुनुपर्ने थियो । ऊ पढाइमा व्यस्त थियो । राति अबेर कश्मीर विश्वविद्यालयले परीक्षा रद्द गरेको सूचना दियो । मैले एक साथीलाई राति साढे १० बजे एसएमएस पठाएँ तर त्यो डेलिभर भएन ।
मेरो इन्टरनेटले त्यतिखेरसम्म काम गरिरहेको थियो । त्यसैले त्यो पूर्ण बन्द भइसकेको जस्तो मलाई लागेन । मेरा आमाबुवा दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो । आमालाई एसएमएस पठाएर म सुतें ।
म सोमवार बिहान उठ्दा भान्सामा अनौठो शून्यता थियो । बिहान प्रायः त्यहाँ गुलिस्तां च्यानलमा आउने प्रभातीय कार्यक्रम हेरेर मैले दिनको आरम्भ गर्थें । तर सोमवार बिहान सबैजना चुपचाप ब्रेकफास्ट लिइरहेका थिए ।
हाम्रो घरबाहिर बिहान चार बजेदेखि सेनाका जवान तैनाथ रहेको मलाई कसैले बतायो । टीभी, ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोन कुनै पनि काम गरिरहेको थिएन । कर्फ्यु लागेको बेलामा बीएसएनएलका ल्यान्डलाइन फोनले त काम गर्थ्यो तर यसपालि त्यसलाई पनि बन्द गरियो ।
हामीहरूलाई खानेकुराको चिन्ता थियो । पसलहरू बन्द थिए र पसले पनि देखिँदैनथिए । मेरा अंकल तरकारी किन्न बाहिर जानुभयो तर सेनाका जवानले उहाँलाई रोके र जोखिम मोलेर किन बाहिर आएको भने ।
उहाँ रित्तै हात घर फर्किनुभयो किनकि तरकारी खोज्न लामो बाटो हिँड्नुपर्ने डर उहाँलाई थियो । उहाँले एकजना पसले त देख्नुभयो तर उसले सबै तरकारी बेचिसकेको थियो । तैपनि आन्टीले तरकारीको व्यवस्था गर्नुभयो ।
कश्मीरका बारेमा के गरिने हो भन्ने केही थाहा हुन सकेको थिएन । घरका पुरुष सदस्यहरू मस्जिदबाट नमाज पढेर फर्केपछि बल्ल थाहा भयो । धारा ३७० खारेज गरिएको खबर अपराह्नमा घर पुगिसकेको थियो । अंकलले पनि मस्जिदमा यही कुरा सुनेको बताउनुभयो ।
हामी सबैले यसलाई अफवाह मानेर वास्ता गरेनौं । राज्य सरकारसँग सल्लाह नलिइकन अनि अदालतमा मुद्दा चल्दा चल्दै पनि सरकारले कसरी धारा खारेज गर्न सक्छ र भनी मैले भाइलाई भनें ।
सञ्चारका कुरा सबै ठप्प पारिएपछि सबैजना मेरो ल्यापटपमा फिल्म हेर्न थाले । साँझ केही च्यानलहरूलाई प्रसारणको अनुमति दिइएको हामीले सुन्यौं । तर दूरदर्शनका च्यानलहरू मात्र आइरहेका थिए, अरू सबै बन्द थिए ।
समाचार हेरेपछि हामीले थाहा पायौं– राज्यसभाले जम्मु कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित गरेछ । जम्मु तथा कश्मीर अब केन्द्रशासित प्रदेश बन्यो । लद्दाखलाई बेग्लै केन्द्रशासित प्रदेश बनाइयो । धारा ३७० र ३५क खारेज गरिएको थियो ।
अब के हुने हो भन्ने सोच आएपछि मेरा आँखामा आँसु आए । समाचार सुनेको १५ मिनेट हामीहरू मौन बस्यौं ।
मेरा भाइहरू बोर हुन थालेका थिए । उनीहरूलाई मैले बगैंचामा खेल्न लगें । हामीले आइस वाटर खेल्न थाल्यौं । अचानक बगैंचामा अश्रूग्यासको गोला आयो । भाइहरू खोक्न थाले तर खेल्न मन गरिरहे । मैले उनीहरूलाई तानेर जबर्जस्ती घरभित्र लगें ।
दिल्ली फर्किनका लागि बिहीवारको टिकट मसँग थियो । तर एयरपोर्टसम्म सुरक्षित रूपमा कसरी पुग्ने भन्ने चिन्ता पनि थियो । अंकलको घरबाट बुधवार बिहान निस्केर विमानस्थल नजिक पुग्ने योजना हामीले बनायौं ।
मंगलवार अपराह्नमा सबै टीभी च्यानललाई प्रसारणको अनुमति दिइयो । तर टीभी च्यानलमा आइरहेका समाचार हामीले सहन सक्ने खालका थिएनन् । त्यसमा खुशियाली मनाइएको दृश्य देखाइँदै थियो । हामी चाहिँ यता घरमा थुनिने, उनीहरू चाहिँ खुशियाली मनाउने ? हाम्रो भविष्यमा असर पार्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध असहमति र क्रोध देखाउन पनि सम्भव थिएन ।
मंगलवार साँझ हाम्रो घरमा फेरि अश्रूग्यासको गोला आइपुग्यो । हाम्रा एक नातेदार घरमा आए अनि अब घर छोडेर दुर्गमको एक घरमा जाने कुरा बताए । श्रीनगरमा उनको घरबाहिर बेस्सरी ढुंगामूढा भइरहेको उनले बताए र अश्रूग्यासका कारण बच्चाहरू डराइरहेको पनि जानकारी दिए । एउटै घरभित्र बसिरहौं भन्नेमा बच्चाहरूको जोड थियो ।
हाम्रो घरमाथि अनेकौं हेलिकप्टर उडिरहेका थिए । तिनको आवाज र तल अश्रूग्यासको वर्षाले हामी युद्धको जस्तो स्थितिमा रहेको विश्वास दिलायो । केही युवकहरूको मृत्यु भइसकेको, केही घाइते भएको मानिसहरू बताइरहेका थिए । तर कसैले पनि केही कुराको पुष्टि गरिरहेको थिएन ।
मंगलवार राति मेरो भाइ कटरास्थित विश्वविद्यालयबाट फर्कियो । उसको कलेजको प्रशासनले सबै कश्मीरीहरूलाई क्याम्पस छोड्न भनेको थियो । उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन नसकिने बताइएको थियो ।
उसलाई घर पुग्न २४ घन्टा लाग्यो । बाटोमा उसले अनेकौं प्रहरीसँग विभिन्न ठाउँमा सहायता माग्यो । मंगलवार राति हामीहरू यो सिलसिला कहिलेसम्म चल्ला भनी सोचिरह्यौं ।
म बिहान पाँच बजे उठें र विमानस्थल नजिकको पीर बाग जान खोजें । आँखामा आँसु भरेर मैले आन्टीलाई गूडबाई भनें । उहाँले मलाई दुबईमा बसिरहेको उहाँको छोरासँग कुरा गर्न भन्नुभयो । आइतवार रातिदेखि छोरासँग फोनमा कुरा गर्न नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । अब कहिले कुरा गर्न पाइने हो भनी उहाँले बिलौना गर्नुभयो ।
सडकहरू सुनसान थिए । बाटोभरि ब्यारिकेड र काँडेतार राखिएका थिए । हामीले कार निकाल्यौं । बिहानै भएकाले हामीलाई कसैले रोकेन । पीर बाग पुग्दा धेरै ब्यारिकेड राखिएको हामीले देख्यौं । साना गल्लीमा जान समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
अबेर साँझ मेरी आन्टी आउनुभयो र उहाँको भाइको छोरालाई अश्रूग्यासका कारण संक्रमण भएको तर कारमा पेट्रोल नभएकाले औषधि लिन जान नपाएको बताउनुभयो । कर्फ्यु लगाइएकाले सार्वजनिक वाहन पनि उपलब्ध छैनन् ।
आमाबुवासँग चार दिनदेखि कुरा गर्न पाएको थिइनँ । उहाँहरू चिन्तित हुनुभएको कुरा मलाई थाहा थियो । तर कश्मीरमा रहेको मेरो परिवारलाई कसरी गूडबाई भनौं भन्ने थाहा पाइरहेकी थिइनँ । उनीहरूलाई त्यस्तो स्थितिमा छोडेर म आफू चाहिँ सामान्य जिन्दगीमा कसरी फर्कौं ?
तर म एक जिम्मेवारीका साथ त्यहाँबाट निस्किएँ । दिल्ली पुगेर सबै दाजुभाइसँग सम्पर्क गरी म उनीहरूका आमाबुवालाई भेटेर फर्किएको र उहाँहरू सुरक्षित रहेको म बताउन चाहन्थें ।
म उनीहरूलाई घरमा रासनपानी रहेको बताउँछु र उहाँहरूले औषधि पनि किनेको भन्छु । निराशा र निरीहताका बीच ईद मनाइरहेको पनि म बताउँछु । यस्तो विवशताले हाम्रो भविष्यलाई कसरी लामो समयसम्म प्रभावित पार्छ भनेर पनि म बताउनेछु ।
पोखराको न्यूरोडमा भीषण आगलागी, निभाउने प्रयास जारी
पोखराको न्युरोड स्थित नवदुर्गा फर्निचरमा भएको आगलागी नियन्त्रणमा, ३० भन्दा बढी सटर जल्यो
ब्वाइफ्रेन्डले मोटी भनेर छोडेपछि ‘सुजनाले घरमै बसेर घटाइन् ६ महिनामा ३६ केजी वजन’
२१ श्रावण २०७६, मंगलवार ०७:१५ August 6, 2019 Nepali Mato
४ असार २०७६, बुधबार १०:४६ June 19, 2019 Nepali Mato
असारे पानीले आज मात्रै ५ जनाको मृत्यु, कहाँ के भयो ,कुन जिल्लामा कति क्षेती?पढ्नुहोस
२७ असार २०७६, शुक्रबार १४:४९ July 12, 2019 Nepali Mato
पशुपति,राजु,देवी र सुस्मिताको यो बर्षको तीज गीत दश लाख दर्शक नजिक,शर्माको पहिलो गीतनै हिट
१ श्रावण २०७६, बुधबार १६:३९ July 17, 2019 Nepali Mato
पाप धुरी बाट कराँउछ,यौन दुर्व्यवहार गरेर भाग्ने क्रममा भिर बाट लडेर मृत्यु
१४ माघ २०७५, सोमबार १२:४८ January 28, 2019 Mahendra Muskan chhetri
भारतकी पूर्व विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको निधन
२२ श्रावण २०७६, बुधबार ००:४६ August 7, 2019 Nepali Mato